Uyenza kanjani uvavanyo lwesantya sefayibha yakho ebonakalayo | Iindaba zeGajethi
Isantya sibalulekile kwihlabathi le-intanethi, ngakumbi nangakumbi iinkonzo zisinika umxholo ekumgangatho ophezulu wokumamela, okanye ngenxa yokuba sifuna ukonwabela imidlalo yethu yevidiyo ekwi-intanethi nangayiphi na indlela. Zininzi izizathu zokwazi ukuba sisiphi esona santya sinyani sisinikwa yi-fiber optic, esinye sazo kukwazi ukuba inkampani esenza isivumelwano nenkonzo iyahambelana na nesivumelwano. Ke ngoko, kubalulekile ukuba ngamaxesha athile senze iimvavanyo zesantya kunxibelelwano lwethu kwaye wazi ukuba siyawafumana onke amandla esiwahlawulayo. Namhlanje kwi-Actualidad Gadget sifuna ukuba uyazi indlela yokulinganisa isantya se-fiber optic yakho nokuba usebenza njani na.
Ngesi sizathu, siza kuncoma ezona webhusayithi zibalaseleyo kunye nokusetyenziswa ukulinganisa isantya sonxibelelwano lwethu lwefayibha, zombini ngentambo nange-WiFi, ke kufuneka sithathele ingqalelo zonke ezinye iindlela esinikezwa ziimarike ezikwi-Intanethi ukuze sikwazi ukwenza uvavanyo ngendlela engqongqo. Ke, gcina amehlo akho evulekile kwaye usebenzise isalathiso ukuba ufuna ukwazi isantya seemitha zonxibelelwano lwakho ngokuxhomekeke kumsebenzisi onikezela ngenkonzo.
1 Uluqhuba njani uvavanyo lwesantya sevodafone fiber
2 Uluqhuba njani uvavanyo lwesantya sefayibha eorenji
3 Uyenza njani uvavanyo lwesantya se-Movistar
4 Uluqhuba njani uvavanyo lwesantya se-ONO
5 Uluqhuba njani uvavanyo lwesantya sefayibha salo naliphi na umsebenzisi
6 Uluqhuba njani uvavanyo olukhawulezayo olusuka kwi-iPhone
7 Uluqhuba njani uvavanyo lwesantya kwi-Android
8 Uluqhuba njani uvavanyo lwesantya kwiPlayStation 4
Uluqhuba njani uvavanyo lwesantya sevodafone fiber
Siqala ngophotho olubomvu, inkampani ekhokelayo ekufumanekeni kwe-4G kwimakethi yaseSpain ikwabonelela ngenkonzo ye-fiber optic ngoncedo lwezixhobo ezenziwa nge-ONO ngomhla wayo, kwaye le yokugqibela yafunyanwa yiVodafone kwakudala, ke oko wayeka ukunikezela kuphela isantya ukuya kuthi ga kwi-30 Mbps kwi-ADSL ukunikezela ngokuthe ngqo ukuya kwi-300 Mbps ngokusebenzisa ifayibha ye-ONO. Nangona kunjalo, IVodafone isinika izicwangciso ezahlukeneyo zokuqesha iipakeji esinokuzifumana LONTO, Oko kunokuthetha ukuba siqesha isantya esingaphezulu okanye esincinci kuxhomekeke kwiimfuno zethu.
Ukufumanisa ukuba bayasithobela na, iVodafone isinika isantya sayo, enye yeempawu eziphambili kukuba isebenzisa itekhnoloji yeAdobe Flash engasasebenziyo, ngenxa yoko awuzukuyisebenzisa kwiPC engenayo iAdobe. I-Flash Player efakiweyo okanye efanayo, ngaphandle kokuba uninzi lweebrawuza ziyizisa ngokungagqibekanga, inkcukacha enokukwenza ukhethe ezinye iintlobo zeemitha zesantya kwaye uyisuse leyo iVodafone uyibeka LONTO.
Uluqhuba njani uvavanyo lwesantya sefayibha eorenji
I-orenji ngomnye umboneleli obaluleke kakhulu we-fiber optic eSpain, kwizixeko ezikhulu ezinjengeMadrid iyalawula ukunikezela nge-Mbps zonxibelelwano ezingekho ngaphantsi kwe-500 symmetric, Olunye lolona nxibelelwano luphambili esinokulufumana kwimarike, ngaphandle kweenkampani ezinje ngeAdamo ezinikezela nge-1 Gbps kodwa ezingasasetyenziswanga kwaye ngokuqinisekileyo azibala ngala maxabiso anomdla asinika wona iorenji LAPHA. Kodwa kuba asikuthandi ukuxhatshazwa, amaxesha ngamaxesha siya kuqhuba uvavanyo lwesantya kunxibelelwano lwethu.
Ngokungafaniyo neVodafone, le nkampani ayinalo uvavanyo lwayo lwesantya, olwenza izinto zibe nzima ngakumbi kuthi, kuba kuya kufuneka sifikelele kuvavanyo lwesantya esizimeleyo esiza kusongeza ekupheleni kwenqaku. Sukuba nexhala kuba ezi mvavanyo zesantya esizimeleyo zibonelela ngeziphumo ezifanayo (ukuba ayingcono) ngokomgangatho kuneemvavanyo zesantya ezibandakanyiweyo kwiwebhusayithi yomboneleli ngenkonzo, ngokulula iOrange ayikhange icinge ngokufaka olu hlobo lwenkonzo.
Uyenza njani uvavanyo lwesantya se-Movistar
I-Movistar ngoyena mnikezeli we-fiber optic exhaphake kulo lonke ilizwe, eneneni ukwanda kwayo kukhulu kangangokuba kusivumela ukuba sikhethe phakathi kwe-50 Mbps kunye ne-300 Mbps kuba inendawo ebanzi kwilizwe liphela, kungoko kunjalo ngaphezulu komnikezeli osinika i-fiber optic kwindawo esihlala kuyo.Kule nto, iMovistar isebenzise uninzi lwezixhobo zayo ze-ADSL kuyo yonke iPeninsula kunye nezinye iindlela zokufikelela kuqala. Nangona kunjalo, Kuya kufuneka ukhumbule ukuba kwiwebhusayithi yayo ungazijonga iirhafu ukuba unomdla wokufumana iinkonzo zabo.
Ukulandela isikhokelo seVodafone, umboneleli wefiber optic kazwelonke ukwasinika uvavanyo lwesantya sayo kwiwebhusayithi yayo, unokufikelela ngokukhawuleza kuyo LONTO kwaye uya kuyazi idatha yoqhagamshelo lwakho njengaluphi umkhangeli owusebenzisayo, yintoni ulayisho kunye namandla okhuphelo asinika uxhulumaniso lwethu kunye nolwazelelo lonxibelelwano lwethu, ukwazi ukuba sinendawo efanelekileyo ezi zifundo zintathu kufuneka zihambe ngesandla ngesandla.
Uluqhuba njani uvavanyo lwesantya se-ONO
Njengoko besesitshilo ngaphambili, I-ONO okwangoku yeyaseVodafone, le nkampani yayinepotifoliyo yomthengi ebalulekileyo kwaye yayizibeke njengenye yezona zinto zinika umdla kwi-fiber optic eSpain, yiyo loo nto yabamba ingqalelo yeVodafone, eyaphela ithatha inkampani ngokupheleleyo. Ngale ndlela, inika amaxabiso okhuphiswano ngakumbi avumela ukuba ime kwiMovistar kwaye isasaze intengiso ye-fiber optic ngendlela enomdla ngakumbi kubathengi.
Nangona kunjalo, Abasebenzisi be-ONO bangaphambili bayaqhubeka nokufumana ezinye iinkonzo kumaphepha ewebhu enkampani, anje Olu vavanyo lwesantya esinokufikelela kulo, ixesha elide ibingumboneleli osemthethweni weemvavanyo zesantya senkampani, nangona kunjalo, kwaye nangona isasebenza, iyaphela ithumela kwenye iwebhusayithi, ke sicebisa ukuba sisebenzise abo sibaziyo njengabazimeleyo. iimvavanyo zesantya kwaye siza kukubonelela ngezantsi ukuze ukhethe, ngaphandle koloyiko.
Uluqhuba njani uvavanyo lwesantya sefayibha salo naliphi na umsebenzisi
Ngoku siza kukwazisa kwinto esiyaziyo njengovavanyo lwesantya esizimeleyo, olu vavanyo lwesantya ayabelwe nayiphi na iwebhusayithi yenkampani, Ke eyona njongo yayo kukusinika inkonzo ngeyona ndlela ikhawulezayo kunye neyona isebenzayo. Maninzi amaphepha ewebhu asinika uvavanyo lwesantya, nangona kunjalo, ngeli xesha siza kukunika olona vavanyo lwaziwayo kwi-intanethi, ukuze kungabikho mathandabuzo malunga nokungathathi cala kweziphumo zabo, siya khona noluhlu.
Uvavanyo olukhawulezayo kuzo zonke iintlobo zebrawuza: LINK
Uvavanyo lwesantya se-HTML: LINK
Olu vavanyo lwesantya lubonelelwa yi-ADSLZone kunye ne-Ookla, iingcali ezimbini ezikolu hlobo lomxholo kwaye zisinika iziphumo ezingathath'icala kwaye ezingaxhaswanga lulo naluphi na uhlobo lwenkampani yemfonomfono, enokuguqula ubunyani besiphumo abasinike sona.
Uluqhuba njani uvavanyo olukhawulezayo olusuka kwi-iPhone
Ukukhawuleza -Uvavanyo lweSantyaMahala
Unephone? Uhm, kule meko ukwenza uvavanyo lwesantya kunokuba yintloko yokwenyani ngenxa yokungangqinelani okunokuthi i-Safari ye-iOS ikwazi ukuvelisa ngolu hlobo lweenkonzo zewebhu, ke kuyakufuneka sithathe ithuba lokutsala isicelo sosimahla se-iOS. Kule meko, i-Ookla yeyona nto siyithandayo, kunokuba kungenjalo kungenjalo Esi sicelo siza kusinika iziphumo ezizodwa ngaphandle kokuchitha idenariyo enye, ke ngoko isicelo onokuzikhuphela kwifayile ye- Ivenkile yeApple kwikhonkco esishiya ngasentla, Yeyona ndlela ilungileyo ukuba into esiyifunayo kukulinganisa isantya sonxibelelwano lwe-intanethi, nokuba sisuka kwi-WiFi okanye kwinethiwekhi yeselfowuni, ngokuthe ngqo kwi-iPhone yethu kwaye ngaphandle kwesithintelo.
Uluqhuba njani uvavanyo lwesantya kwi-Android
Isantya se-Ookla Speedtest-Uvavanyo lweSantya
Kulapho siza kufumana ezona ngxaki zincinci, kuba uninzi lweebrawuza ze-Android ziyahambelana nezinye iindlela ebesikhe sazinika ngaphambili, nangona kunjalo, sinokukhetha izicelo ezichanekileyo kwaye ziya kusinika iziphumo ezingakumbi. Kungenxa yoko le nto kwintloko yeli candelo sikushiya kwakhona enye indlela yeOokla, imitha yesantya se-intanethi esisinika olona lonwabo. Kuya kufuneka sikhuphele kwaye sifake usetyenziso, kwaye ucofe ku «Uvavanyo lokuQala»
Uluqhuba njani uvavanyo lwesantya kwiPlayStation 4
Ukwazi iziphumo zonxibelelwano lwefibre optic yeyona nto iphambili ukonwabela imidlalo yethu, kungekuphela xa uyikhuphela kwiVenkile yePlayStation, kodwa naxa udlala imidlalo, umxholo wabadlali abaninzi uya usiba bhetele kwiConsole yakwaSony, yiyo loo nto Khange bashukumise isandla sabo ukufaka eyabo imitha yoqhagamshelo ngaphakathi kwePlayStation 4. Ukwenza oku siza kuya kwicandelo "loMnatha" ngaphakathi kwemenyu yezicwangciso kwaye siza kukhetha "Uxhumano lovavanyo", ukuqala komthendeleko.
Isitshixo siza kulala kwisantya sokugqibela (esingasibonisi kuthi), ke kufuneka siqiniseke ukuba sinika ubuncinci i-NAT 2 njengesiphumo sokugqibela, esiya kuba sisiqinisekiso sokuba siya kuba namava okudlala ubuncinci busivumela ukuba sonwabele umxholo. Esi sikhundla sikwangundoqo xa kuziwa ekusebenziseni iMovistar + okanye iNetflix kwizicelo ezikwikhonsoli yethu, ukusukela uqhagamshelo olungcono, umgangatho ophezulu xa ujonga umxholo, nangakumbi ukuba sijongana nomxholo wesisombululo esiphakamileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Uyenza kanjani uvavanyo lwesantya kuwo nawuphi na umsebenzisi